Obama oo ay caqabad ka heysato Miisaaniyadiisa cusub! - Wargane News
Home Somali News Obama oo ay caqabad ka heysato Miisaaniyadiisa cusub!
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa soo bandhigay miisaaniyada cusub ee xukuumadiisa, wallow uu muuran xoogan ka taagan yahay Baarlamaanka Maraykanka oo ku kala qeybsan ansixinta Miisaaniyada dowlada.
Barack Obama ayaa doonaya in miisaaniyada xukuumada Maraykanka sare loo qaado 75 Bilyan oo dollar, isagoo markaasi miisaaniyada cusub u qoondeeyey lacag gaareysa 9 bilyan la dagaalanka kooxda ISIS.
Qorshaha miisaaniyada Obama ayaa waxaa ku jirta in sare loo qaado canshuurta laga qaado dadka maalqabeenada ah, arrintaasi oo ay si weyn uga soo horjeedaan xisbiga mucaaridka ah ee Jamhuuriga oo hada leh codka aqlabiyada Golayaasha Baarlamaanka Maraykanka.
Somaliland: Maxu Daarna Kulankii Xuuto Iyo Cali Mareexaan Ee Qasrigga Madaxtooyadda Jsl
Kenya: War Deg Deg ah:-Ciidamada Kenya Oo Diley Guddoomiyihii Degmada Ceel-cadde